Candy Crush Level 1442 Cheats uye Tips - Pipi Crush Game - Free Lives Tips Cheats Hints
You are here: Home / Pipi Crush Game / Candy Crush Level 1442 Cheats uye Tips
Last updated on Mbudzi 11, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
Candy Crush fever haisi kudzika chero nguva munguva pfupi, uye sezvo vanhu vachiramba vachisvika nhanho dzepamusoro, kufarira kwavo kunoramba kuchikwira. Iyo hutsinye loop asi nenzira inonakidza. Matanho akaoma chikamu chemutambo, saka isu takagadzira chidimbu ichi kuti tikupe iwe Pipi Crush Level 1442 Cheats uye Tips!
Chimwe chezvakanakisa zvinhu nezve candy Crush ndechekuti iwo epamusoro mazinga ane zvimwe zvakasarudzika maficha asingagadziriswe nyore. Izvi zvinopa mukana kune vatambi venguva dzose uye vane shungu yekuwana mukana wemakwikwi pamusoro pechaunga. Iyo inoita seyakapusa swipe uye kuhwina maitiro anopikiswa kana vatambi vasangana nezvinangwa zvinonetsa uye zvinokuita kuti ushandise noggin yako..
Zvakadaro, mutambo wacho wakanaka sezvauri; ikozvino, pasina imwezve ado, ngaticherere mukati.
Chinangwa cheNhanho-1442 cheCandy Crush Saga ndechekutora hazelnut imwe uye cherry imwe.. Uku ndiko kubata, unofanira kuzviita nekururama 20 unotii; pamusoro pe izvozvo, there are two locks that need to be unlocked and there are jelly makers at the bottom that keep spawning jellies to block your path. The collection points are at the bottom and getting the ingredients there has proven out to be one hectic task.
Iyo yakaipa spawners inogara ichitenderera uye inosunungura jellies kana yazara. Ivo vanofanirwa kuvhiringwa nguva dzose uye kuparadzwa panguva imwe chete mucheni yekuita kuti vagadzire nzira yekuti zvinosanganisa zvipfuure..
Candy Crush Level 1442 Matipi uye Matipi:
Kunyangwe iyo nhanho yakaoma uye inogona kutora akati wandei kuyedza usati wapfuura, tinovimba kuti matipi auchawana pazasi ari kukubatsira kuti upfuure nhanho iyi mukuedza kushoma sezvinobvira.
Ramba wakatarisa pane zvakaipa zvinobereka. Pinda padivi pavo kana shandisa zvihwitsi zvakabviswa kumusoro kuti uvavhiringidze. Yakakanganiswa katatu panguva imwe chete, vacharega kubereka.
Iva nechokwadi chekuvhura zvipfuva zvakakiyiwa nemakiyi ezvihwitsi. Izvi zvinokupa mavhiri maviri ekokonati iwe aunogona kutendeukira kuruboshwe nekurudyi kuti ugadzire zvihwitsi zvine mitsetse kuti uvhiringidze zvakaipa..
Sezvo chinangwa chiri chekuunganidza zviyo, edza kubvisa ma spawners pazasi nekurova kashanu.
Izvi zvichatanga ketani kuita uye ese ma spawners achaparadzwa.
Tamba pazasi pane kumusoro. Izvi zvinogadzira mukana wekufamba kutsva uye mikana yekugadzira yakakosha candies.
Ramba uine ziso pane nhamba yekufamba kwasara. Imwe yemhosho huru inoitwa nevatambi ndeyekuti vanorasika mumutambo zvekuti havatomboziva kana vabuda mukufamba..
Kana uchikwanisa, saka isu tinokurudzira kushandisa zvihwitsi zvakakosha zvaunogona kusarudza pakutanga. Sezvo uine mashoma mafambiro, inogona kutanga yakasimba haufungi?
Saka, hazvisi zvakaoma hazvo? Paradzai mazai, vhura zvipfuva zvihwitsi, unganidza cherry uye hazelnut, uye wagona kuenda. Kusvika panguva inotevera, gara zvinotapira!!!